Stallion Home Service – Quality Engine Oils & Lubricants Distributor in Myanmar | Stallion Lubricants | Lubricants in Myanmar
Stallion Home Service
Quality Engine Oils & Lubricants Distributor in Myanmar | Stallion Lubricants | Lubricants in MyanmarStallion Home Service
Stallion Lubricants ပစ္စည်းအစုံလိုက် Promotion
လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုမည့် Stallion အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ရေအေးဆီ၊ အော်တိုဂီယာဝိုင် သုံးမျိုး ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Discount ၅၀၀၀ ကျပ် ရယူနိုင်ပါသည်။
Home Service - အိမ်တိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
အိမ်တိုင်ရာရောက် အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ Filter လဲခြင်း၊ ရေအေးဆီ လဲခြင်း၊ ဂီယာဝိုင်လဲခြင်း။
ကျွမ်းကျင်တဲ့ စက်ဆရာများနဲ့ စနစ်တကျ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
အခြားလိုအပ်သော စစ်ဆေး ချက်များကို အပိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ။
တာဝန်ယူပြီးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် Warranty ပေးခြင်း စတဲ့ အပို ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ခရီးစရိတ် ကျသင့်ငွေမှာ ၆၀၀၀ ကျပ် နှင့် ၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
Stallion Home Maintenance Service ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ရုံနဲ့ ထပ်တိုးရရှိမယ့် ခံစားခွင့်များ
အင်ဂျင်ဝိုင်လဲပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်ယိုစီးမှု မရှိအောင် ချက်နက်စ်ဝှိုင်းစီးကွင်း ထည့်ပေးခြင်း
အော်တိုဂီယာဝိုင် စစ်ဆေးပေးခြင်း။ -ရေတိုင်ကီ စစ်ဆေးပေးခြင်း ။ –
မီးလိုင်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း ။
Air Filter သန့်စင်စစ်ဆေးပေးခြင်း
အခုပဲ ဝန်ဆောင်မှုရယူနိင်ရန် ဆက်သွယ်မည်
Shop - ရရှိနိင်သော ထုတ်ကုန်များ
SYN-TECH (Fully Synthetics SN/GF-5 5W40/10W30)
ထုတ်လုပ်ထားပြီး အင်ဂျင်၏ စွမ်းရည်ကို
ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတွက် အင်ဂျင်၏
အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အင်ဂျင်၏
Super Charger ,Turbo Charger Engine,
Sport Utility Vehicle & High
Performance Cars များအတွက်အထူး
Specification exceeds CCMSG5/PD-1,
ACEAB2, MIL-L-46152, MBp227.5
S-3000 (Semi Synthetic SN/GF5 5W30/10W30/10W40)
Synthetic Base Oil ကိုအခြေခံ
Semi Synthetic အဆင့်မြင့်
. Specification exceeds
ACEA A2 96/B2-96,Vovl
VDS, CCMC G4/PD2,VW
501.01& 505.00 Toyota 3AU &
1G-FE, Nissan VG-20E and most
S2000 (SJ/CF-4 20W50)
. အင်ဂျင် Power တိုးတက်မှုကိုဖြစ်
မှုများကိုလည်း သက်သာစေပြီး ဆီစား
. Specification exceeds ACEA04-E2,
ACEA02-E2/B3/T2, MB2281.1 Blanked,
MB229.1, MAN271, Volvo VDS/VDS-2,
Cummins CES20.071/6, Allison C4,
ZF TE-ML07C/04C and most major
Super Diesel ( CH-4/SJ 15W40 / 20W50)
High Way သွားကားများ၊ Turbo
ယန္တရားများနှင့် Heavy duty သုံး
. မည်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေ
. Specification exceeds MIL-L-2104E,
MACK EO-K/2,Allison C-4 and
most major motor manufacturer
Super Diesel Plus (CI4/SL 15W-40/20W-50)
အင်ဂျင်တပ်ကားများ၊ Express ကားများ၊
. မည်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေတွင်မဆို
. Specification exceeds CCMC D5/
PD-2 , MIL-L-2104F,MBp228-3,
MAN, SHPD and most major motor
C3000 Semi Synthetics CJ-4 10W30 (6L+1L= Total 7L)
ယနေ့ခေတ် Heavy Duty Diesel Engine
၏ နည်းပညာမြင့်မားမှုနှင့်အညီ Ultra-High
Performance ရရှိစေရန်နှင့် အင်ဂျင်အစိတ်
Off-Road, on High Way, Construction
Semi-Synthetic base oil ကို
Super C3 (15W40)
. မည်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေတွင်
PD-2 , MIL-L-2104F, MBp228-3,
Super S3 (15W40)
ကားများ၊ယန္တရားများနှင့် Heavy duty
MIL-L-46152E, CCMC-D4/G4/PD- 2,
MACK EO-K/2,Allison C-4 and most
Coolant , Auto Gear Oil & Brake Oil
Radiator Coolant (Green & Pink)
အစိမ်း နှင့် ပန်းရောင် နှစ်မျိုးရှိပြီး
အာနိသင် ဂုဏ်သတ္တိ အတူတူဖြစ်ခြင်း။
. ရေတိုင်ကီ အတွင်းရှိ သံချေးများအား
. အင်ဂျင်အပူချိန် (Heat) မတက်စေခြင်း။
. Chemical 40% / Water 60%
. Repeat every 12 months Change
. ဂီယာအတွင်းရှိ ပင်နယံ နှင့်အခြားသော
. Recommend Oil Change Kilometer
JASO M315 Type 1A စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း
. Type4အဆင့်ရှိ အော်တိုဂီယာဝိုင်
(50,000) Specification exceeds ACEA04-
E2, ACEA02-E2/B3/T2, MB2281.1 Blanked,
Cummins CES20.071/6, Allison
C4, ZF TE-ML07C/04C and most
major manufacturer requirements.
. Synthetic Oil ဖြစ်သည့်အတွက်
နိုင်ခြင်း နှင့် ပွန်းစားမှုလျော့နည်း
. Chain Drive Type သာမက
Belt Drive Type များတွင်ပါ
. Honda Multi Matic Fluid (HMMF)
အမျိုးအစား CVT gear box များတွင်လည်း
. No Use (Toyoto Hybrid & Ford Hybrid)
U.K နည်းပညာသုံး DOT 3
. အန္တရာယ်ကာကွယ်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်၍
. သံချေးမတက်စေသော additive
. ဒစ်ဘရိတ် နှင့် ဒရမ်ဘရိတ် နှစ်ခု
နှင့် ဘရိတ်တွင်ပါရှိသည့် အစိတ်ပိုင်း
များကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
. ဘရိတ်ဆီ နှင့်ထိတွေ့ရသော သံ၊